အနောက်ဘက် တံတိုင်းသို့ လှမ်းကြည့် ခြင်း (၁) | The FNG
အနောက်ဘက် တံတိုင်းသို့ လှမ်းကြည့် ခြင်း (၁)
July 29, 2012 · by 21 South News	· in သတင်း ဆောင်းပါး, OP / ED.	·
by ငြိမ်းအေးအိမ် တိုင်းရင်းသားများအတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးသော တန်းတူ
အခွင့်အရေးများနှင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးများကို လွှတ်တော်မှ
လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ ဥပဒေပြုမည်ဆိုပါက တိုင်းရင်းသားများ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာပဋိက္ခများ အမြန်ဆုံးပြေလည်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်
စုငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ကို တိုက်တွန်း
လိုက်သည်။ (The Voice, Mondat,July 16-22,2012,P23,L1-3)
တိုစကားအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား များစွာ ကျေးဇူးတင်မိသည်။ “တိုင်းရင်းသားများ” “အသက်တမျှအရေးကြီးသော” “တန်းတူအခွင့်အရေး” ဆိုသောစကားလုံးများ ကျွန်တော့်အာရုံတွင် ၀ဲလှည့်နေ တော့၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နိုင်ငံအတွက် အသက်သွေးတမျှလိုအပ်နေသော၊
တာဝန်ယူခဲ့သူ အဆက်ဆက် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားပြီး အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သင့်သော
အရာများဖြစ်သည်။ ယနေ့ ထိုစကားများကြားရပြီ။မကြာမြင့်မီထိုဆီသို့သွားသော ခြေလှမ်းများ
မြင်ခွင့်ရတော့မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ ရောက်အောင်လျှောက်ကြလျှင် လာမည့်နေ့သစ်များတွင် နေခြည်နွေး၍ လေပြည်အေးလိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု မှတ်တမ်းမှတ်ရာများက ဆိုသော် လည်း နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မကြားဘူးသည့်လူမျိုးအမည်မှာ အများစုဖြစ်မည်ထင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ မည်မျှပင် လူဦးရေနည်းပါးသည်ဖြစ်စေ (ဥပမာ၊ ၂၀၀၄ခုနှစ်စာရင်းဇယားများအရ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျား တွင် အခြေချသော “ထရုံ”လူမျိုးဦးရေ (၆)ဦး(ခြောက်ဦး)သာရှိတော့ပြီး မျိုးဆက်ထပ်မပွားနိုင်သည့်အခြအနေမျိုးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုမျိုးနွယ်စုများ မျိုးသုဉ်းသွားမသွား မပြောနိုင်)အားလုံးသော တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည် တန်းတူ အခွင့်အရေး ရကြရမည်၊ရခွင့်ရှိကြသည်သာဖြစ်၏။ ဗမာတိုင်းရင်းသားနှင့် ကျန်လူမျိုးတိုင်းရင်းသားများအကြား မယုံကြည်မှုများ၊ သံသယများနှင့်နေထိုင်လာခဲ့ကြရသည်မှာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပေပြီ။ ထို “အဟ” “အပြဲ”ကို သမ္မတကြီး၏ လမ်းညွှန်စကားနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များက ကောင်းမွန်စွာ ရင်ကြားစေ့ပေးနိုင်မည်၊ နိုင်ငံ၏ နာတာရှည်ဒဏ်ရာကြီးကိုလည်း အနာကျက်စေနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်လိုပါသည်။
ထိုသို့ကိုယ့်ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့၊ သေနတ်သံတွေ စဲဖို့၊ စစ်ဒဏ်ခံ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အမိုးအကာရှိရာ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိရာသို့ လုံခြုံစွာ ပြန်ရောက် စေဖို့၊ မျှတသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိကြစေဖို့၊ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ယာအရေးကို ကိုယ်တိုင်စီမံနိုင် ကြစေဖို့ အစွမ်းကုန် လုံးပမ်း ကြရမည့် အချိန်/အခြေအနေမျိုးတွင် “ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု(ethnic) ဖြစ်သည် ဟုဆိုကာ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဘေးတီးပေး နေသောအဖြစ်မျိုးနှင့်လည်း ချိန်ကိုက် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်အရေး၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ပြီးစီး အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်သေးမီတွင် သူတစ်ပါးအထုပ်ကို ခေါင်းပေါ် လာအတင်ခံရ သည့် အခြေအနေမျိုးနှင့် တူနေပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိက္ခကို မွတ်ဆလင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြားက ဘာသာရေး ပြဿနာကြီးသဖွယ် ပုံဖျက်နေကြသည်။ အီဂျစ်တွင်၊ ထိုင်းတွင်၊ အင်ဒို နီးရှားတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ် တရုတ်ငလျင်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ရသူများ အလောင်းပုံဘေးက ကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသော တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးများပုံအောက်တွင် ‘The Body of Musilms slaughted By Buddhist(Burma)”” ဟုအမည်တပ်လိုတပ်၊ ၂၀၀၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာက ထိုင်းတွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် မွတ်ဆလင်ဆန္ဒပြမှုသတင်းဓါတ်ပုံအောက်တွင် “More then 1000 people killed in Burma” ဟုပုံစာထိုး ကာ အွန်လိုင်းမှ အစွမ်းကုန်ဖြန့်ဝေကြရန် လှုံ့ဆော်သွေးထိုးသူကသွေးထိုး၊ ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဟု ကုန်းအော် သူ အော်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကို စိတ်တိုင်းကျ အမဲဖျက်နေကြသည့်နှယ် ကြံစည်လုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟု ခံစားရသည်။ 2012၊ ဇွန်၊ 17 ရက်က မလေးရှား(ကွာလာလမ်ပူ)တွင် ဆန္ဒပြနေသောတစ်ဦး၏လက်၌ ရခိုင်တွင် ရိုဟင်ဂျာများ အသတ်ခံနေရပြီဟု ပုံဖေါ်ကိုင်ဆောင်ထားသောပုံမှာ ဒုက္ခသည်များအား အင်ဒိုနီးရှား ကမ်းခြေစောင့်အဖွဲ့က ကယ်တင်လာစဉ်က သတင်းဓါတ်ပုံဖြစ်နေသည်။ အဖြစ်အပျက်၏ အချက်လက်မှန်များကို ရှာဖွေ နိုင်စွမ်းမရှိကြသော ဦးနှောက်နည်းသူ ၊ ဥာဏ်ရည်မမီသူ တွေများလား၊ နောက်ကွယ်က ကြိမ်တို့ခိုင်းစေနေသော အင်အားကြီးတစ်ခုခုကြောင့် မျက်စိမှိတ်လုပ်ဆောင် နေကြသူ များလားဟူသည်ကို ခွဲခြားရန်ခက်နေပါသည်။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူပေါင်းများစွာက လွယ်လင့်တကူ မှီငြမ်းပြုစရာဟု သတ်မှတ်ထားသော wikipedia.org တွင်ပင်၊ ကျွန်တော် ပရင့်ထုတ်ကြည့်ချိန် 7/15/2012 5:02PM က There was intense sectarian clashes in June 2012. Over 2,000 people were killed in sectarian violence in the state in which most victims were Muslims. During her visit to Myanmar Mrs. Cliton told Mr. Thein Sein the United State was concerned about the treatment of the Rohingya Muslim ethnic group, which has suffered killings at the hands of Buddhists. လူနှစ်ထောင်ကျော်သေသည်။ အများစုက မွတ်ဆလင်တွေဖြစ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်လိုလိုတင်၊ ဒေါ်ကလင်တန်ကြီးက ရိုဟင်ဂျာများကို ethnic group ဟု သုံးနှုံးကြောင်းပြောလိုပြောနှင့်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်အကြောင်း သိချင်၍ ဖြစ်စေ၊ ထိုအဓိကရုဏ်းအကြောင်းသိလို ၍ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က ၀ီကီကို ကိုးကားလိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုသူ့အမြင်တွင် အမှန်တွေနှင့် ကင်းစင် နေ/တိမ်းချော်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အလွန်လျှင်မြန်သော သတင်းမီဒီယာခေတ်တွင် အမှားတွေ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တွေ အမှားဖြစ် ကြောင်း ပုံဖျက်ဖို့ အလွန်လွယ်ကူနေပါသည်။ ကောလဟာလများ၊ ကြိုတင် တင်ကူးကြံစည်ထားသော စီမံချက် များ အောက်တွင် အဖြစ်မှန်တို့ တန်ဖိုး ယုတ်လျော့ ဆုံးပါးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေရပါသည်။
ကျွန်တော့်တစ်ဦးတည်း၏ အမြင်ရဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား/ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ဟု မမှတ်ယူနိုင်ပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်မူ တိုင်းပြည်က အတည်ပြုမည့် လိုက်နာကျင့်သုံးမည့် ဥပဒေများကသာ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်တိုင်းလည်း တိုင်းရင်းသားတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၈ ရာစုလောက်က သဘောင်္ပျက် ရင်း ရောက်လာကြသော အာရပ်ကမ္ဘာက ကုန်သည်များဖြစ်သည်ဟူသည့် မရေရာသော နှုတ်ဆင့်ကမ်း “ပြောဇာတ်” မျှလောက်ဖြင့် မြန်မာ့မြေပေါ်က တိုင်းရင်းသားဟု ယူဆသတ်မှတ်ပေးရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ မြန်မာ့အနောက်ကမ်းခြေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတို့သည် ခန်းနားခိုင်ခန့်ကြီးကျယ်လွန်းလှသည်။ ထိုဒေသ၏တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုစာရင်းတွင်၊ (၁)ရခိုင်လူမျိုး၊ (၂)ကမန်မျိုးနွယ်စု၊ (၃) ခမွီးမျိုးနွယ်စု၊ (၄) ဒိုင်းနက်မျိုးနွယ်စု၊ (၅)မရမာကြီး မျိုးနွယ်စု၊ (၆)မြို မျိုးနွယ်စု၊ (၇) သက်မျိုးနွယ်စုဟူ၍ အထင်အရှားရှိပြီး ဖြစ်၏။ ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် စာရင်းမ၀င် နေရာမရှိခဲ့ပါ။
ဤစိတ်အခံဖြင့် ကျွန်တော် “အနောက်ဘက်တံတိုင်းသို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်” မိပါတော့သည်။
← အိုဘားမား က မစ်ရွမ်နီ ထက် လူကြိုက်များ နေဆဲ
မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ် ပိုင်း တွင် ၅.၇ အဆင့် ရှိ ငလျှင် လှုပ် →
One response to “အနောက်ဘက် တံတိုင်းသို့ လှမ်းကြည့် ခြင်း (၁)”
့honey July 30, 2012 at 9:19 am · ·